Ihe kpatara ndi mmadu ji wepu aha na Email gi (na otu esi ewepu akwukwo) | Martech Zone
Ndị debanyere aha anaghị eche banyere ọdịiche dị n'etiti wepu aha na naanị akara email gị dị ka SPAM… ha na-eme ya kwa ụbọchị. Ha amataghi nsogbu nke ikpesa ozi email gi dika SPAM nwere ike igbochi gi igbe nke igbe nke otutu puku ndi debanyere aha na ndi n’enye Intanet. Ọ bụ ya mere anyị ji nlezianya nyochaa anyị ntinye igbe na ndi ozo anyi na 250ok!
Ya mere izopu njikọ wepu aha na email gị abụghị naanị na Ọ gaghị ebelata ọnụ ọgụgụ ndị na-edebanye aha, ọ ga-emekwa ka ị banye ná nsogbu na ntinye igbe gị. Ya ejula gi anya ma oburu na ntughari obere ederede ahu emere na email gi iji mee ka o sie ike iwepu oke ifufe na-egbu onodu igbe ozi gi na uzo ntinye na ntughari site na ozi ịntanetị gi.
Isi ihe kpatara ndị mmadụ wepu aha na email gị
E-mail adịghị mma design ma ọ bụ detuo (echefula email na-anabata ndebiri ndebanye).
Gafere ma ọ bụ email ezughị oke ugboro. Ọ bụ ya mere anyị ji enye akwụkwọ akụkọ kwa ụbọchị na kwa izu kwa akwụkwọ akụkọ anyị CircuPress.
Izipu ozi ịntanetị na-enweghị ikike.
Odighi mkpa ọdịnaya email. 24% nke ndị azịza BlueHornet kwuru na ha ga-ahapụ n'ihi na email ahụ adịghị mkpa!
Ọgwụgwụ nke enye ma ọ bụ ọrịre.
Iwe ma ọ bụ nduhie isiokwu akara.
Ụkọ nke keonwe (ọ bụ ezie na echere m na ịhazi onwe onye dị njọ karịa nke ọ bụla).
Mgbanwe nke mmasị, dị ka ịhapụ ụlọ ọrụ ma ọ bụ ụlọ ọrụ.
Ihe omuma a site na EmailMonks na-enye ụfọdụ ndụmọdụ dị mma iji meziwanye nhọrọ ndenye aha gị ma mejuputa ụfọdụ omume kachasị mma iji melite njigide ndepụta gị ma belata ọnụ ọgụgụ ndị na-edeghị aha.
Tags: email imeweemail ugboroemail na-enyeemail nkeonweahịrị ederede emailemail wepu aha yaemailmonksndetu njigideebe mmasịndenye ahawepu usoro kacha mmawepu aha yaihe kpatara na ndi mmadu wepu aha